Barcelona oo ku dhow inay dhameystirto heshiiska xiddig ka tirsan Kooxda Ajax – Gool FM
Dajiye September 17, 2020
(Barcelona) 17 Sebt 2020. Wargeyska “Daily Telegraph” ee dalka England ayaa soo wariyay in Barcelona ay ku dhawdahay inay la soo saxiixato xiddiga kooxda Ajax ee Sergiño Dest, inta lagu gudi jiro suuqan kala iibsiga ee xagaaga.
Kooxda Barcelona ayaa isku dayaysa inay soo gabagabeyso heshiisyo cusub kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga, inkastoo dhibaato dhaqaale uu sababay caabuqa Korona.
19 jirkan reer Holland ayaa ka mid ah xiddigaha ay bar-tilmaameedka ka dhiganeyso kooxda Barcelona suuqan xagaaga, si loogu xoojiyo booska daafaca garabka midig ee kooxda.
Wargayska ayaa tilmaamay in Barcelona ay ku dhawdahay inay dhameystirto heshiiskan kahor dhamaadka suuqan xagaaga. iyada oo ku garaacaysa dhamaan kooxihii isku dayay inay gacanta ku dhigaan adeega laacibkan, xilliyadii la soo dhaafay.
Wargeyska ayaa wuxuu intaas ku daray in kooxaha Bayern Munich iyo Manchester City ay xiiseynayaan inay la saxiixdaan laacibkan da’ada yar ee Sergiño Dest, laakiin Barcelona ayaa kaga cad cad marka loo fiiriyo iyaga, waxaana la filayaa in heshiiskan la dhameystiro maalmaha soo socda.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Sergiño Dest ku joogo kooxda Ajax uu dhacayo xagaaga 2022, wuxuuna 19 jirkan ciyaaray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 30 kulan, isaga oo dhaliyay 5 gool.